Malmö oo adkeyn doonta sharciyada lacagta ceyrta lagu qaato - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
sawir: Björn Larsson Rosvall/TT
Malmö oo adkeyn doonta sharciyada lacagta ceyrta lagu qaato
Malmö oo sharciyada lacagaha ceyrta ah lagu qaato adkeyn doonta.
La daabacay torsdag 9 november 2017 kl 11.43
Degamada Malmö oo ey imminka xukunkeeda hayaan xisbiyada Socialdemoquraadi-ga iyo Miljöparti-ga ayaa adkeynaya lacagaha mucaawinada ah ee la siiyo dadka aan shaqeyn.
Go’aankaan cusub ayaa shuruudo adadag oo dhanka shaqada la xiriira ku xiri doona dadka lacagaha ceyrta degmadaas ka qaata, waxaa kaloo adkaan doonta in dadka aan heysan waraaqa sharci oo ey dalkaan Sweden ku dagan yihiin ey degmadaas lacago caawimaad ah ka helaan.
Sedat Arif (S) oo degmada Malmö u qaabilsan waaxda suuqa shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa sheegey in ey arrinkaan u sameynayaan si ey dadkaas suuqa shaqada u soo galaan, taageerada dhaqaale oo la siiyaana ey tahay oo kaliya mid ku meel gaar ah oo waqti kooban ku eg, waana wax laga xumaado in dad badan oo degmadaan ku nooli ey caadeysteen in ey muddo dheer qaataan lacagta cayrta, ayuu yiri Sedat Arif.
Sedat Arif ayaa intaas ku darey in caruurta aan lagu ciqaabi doonin go’aanadaas qaldan ee ey waalidiintood qaateen, waanuna sii caawin doonaa qoysaskaas caruurta leh inkastoo aanu sidii hore ka sii ad-adkaan doono.
Go’aanka kama danbeynta ah ee arrinkaan ku saabsan ayaa waxaa la gaari doonaa 28-ka bisha november.
Magaalada Malmö ayaa sanadkaan dhexdiisa waxay bixisey lacag ceyr ah oo guud ahaan dhan 979 milyan oo karoon, waxaana magaaladaas hadda lacagaha ceyr ka qaata qiyaastii tobankii qofba hal qof, tiradaas oo aad uga badan marka la barbardhigo magaalooyinka Stockholm iyo Göteborg.
Shaqa la’aanta degmadaas ka jirta ayaa dhan boqolkiiba 15 xataa iyadoo tobankii sanee la soo dhaafey ey dadka shaqeeyaa kor u keceen boqolkiiba 24.